प्रहरीमा किन अख्तियार जान होडबाजी ? यस्तो छ कारण - Deshko News Deshko News प्रहरीमा किन अख्तियार जान होडबाजी ? यस्तो छ कारण - Deshko News
प्रहरीमा किन अख्तियार जान होडबाजी ? यस्तो छ कारण
काठमाडाैं, भदौ ५
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुन प्रहरीमा होडबाजी चल्ने गरेको छ । महाभियोग लाग्दालाग्दै अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त भएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अख्यिारमा प्रहरी दरबन्दी ६ गुणाले वृद्धि गराएका थिए । दरबन्दी बढेसँगै अख्तियारमा पोस्टिङ खोज्दै राजनीतिक ‘सोर्स’ र अख्तियारकै ‘कृपा’ खोज्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढेको हो । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।